HomeWararka CiyaarahaLiiska: Real Madrid oo iska iibineysa lix ciyaaryahan oo kooxda
November 9, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga, Warka Xiisaha Leh 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u furan tahay inay iibiso ilaa lix ciyaaryahan inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee Janaayo.
Los Blancos ayaa si fiican ku bilaabatay ololahan iyada oo fadhida booska 2-aad ee kala saraynta horyaalka La Liga iyaga oo hal dhibic kaliya ka dambeeya hogaamiyayaasha lama filaanka ah ee Real Sociedad.
Si kastaba ha ahaatee, xilli kooxda ay sii socoto in lala xiriiriyo Kylian Mbappe iyo Erling Braut Haaland , madaxweyne Florentino Perez waa inuu dhimaa biilka mushaharka kooxda bilaha soo socda.
Sida laga soo xigtay AS , Real ayaa diyaar u ah inay bisha Janaayo kala tagto dhowr ciyaaryahan oo dakhli badan, oo ay ku jiraan Isco iyo Gareth Bale .
Labada kubad sameeye, iyo sidoo kale daafaca Marcelo , ayaa dhamaantood lagu wadaa inay beeca xorta ah kaga tagaan Bernabeu xagaaga hadii aysan ka tagin Janaayo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Jesus Vallejo iyo Luka Jovic , oo labaduba aan ku soo bilaaban horyaalka La Liga xilli ciyaareedkan, ay sidoo kale xor u yihiin inay baxaan haddii dalab ku habboon la sameeyo.
Eden Hazard ayaa lagu eedeeyay inuu ka mid yahay liiska ciyaartoyda laga yaabo inuu baxo, laakiin ma cadda in xiddiga heerka caalami ee dalka Belgium uu isku diyaarin doono inuu tartan cusub qabto sanadka cusub.